Cunto-ga waxay bixisaa kala-saaris Viruses Computer
Fayraska kombiyuutarku waa barnaamij khaas ah oo isku rogaya loona beddelo nidaamyada kale ee kombiyuutarada adigoo gelinaya lambarkooda gaarka ah. Barnaamijyada xun ama fayrasku waxay ku faafaan aalado badan oo ka mid ah qalabka waxayna abuuri karaan carqalad dadka u dhexaysa warbaahinta bulshada. Halkan, Alexander Peresunko, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiil, ayaa ka hadlayey noocyada ugu waaweyn ee fayraska kombiyuutarka.
Fikradda Fidinta Bootka
Marka qalabka kombiyuuterka kumbiyuutarrada, qawaaniin gaar ah ayaa lagu hirgeliyaa dharkooda - joyetech evic vtc mini 75w. Xeerarkan ayaa ku rakibaya nidaamka hawlgalka, sida Linux, Unix, iyo Windows. Marka nidaamka reristarka uu dhammeeyo, waad iska baari kartaa oo aad bedeli kartaa qalabka kombiyuutarkaaga. Koodhka waxaa loo yaqaana sida qaybta bootka iyo joogista qalabka bootka ee qalabka kombiyuutarka si ku-meelgaar ah ama si joogto ah. Maalmahan, marar dhif ah waxaanu ku helnaa fayrasta bootka ee internetka, laakiin waxay ku jiraan hal qaab ama midkale waxayna hoos u dhigi karaan hawlaha nidaamka kombiyuutarkaaga.
Barnaamijka ama Fikradaha Faylasha
Barnaamijka ama feylalaha feylka waxay kufsadaan faylashaada barnaamijka iyo faylasha kombiyuutarka gudahood. Inta badan, waxay saameeyaan feylalka ku jira C-ga ee qalabkaaga iyo sidoo kale Windows oo leh kordhin sida korantada sida .exe, .com, .bat, .sys, iyo .pif. Fayrasyadaasi waxay si firfircoon uga shaqeynayaan qalabkaaga waxayna bedelayaan xogta nidaamka kombiyuutarkaaga..Fayraskan ayaa naftiisa ku dhejin kara xasuusta, wuxuuna isku rogi karaa faylasha.
Fayraska makro wuxuu kufarsiisaa faylashaada, feylka, iyo bandhigyada suugaanta Microsoft Office. Waxay geliyaan codkooda oo ay keenaan feylo been abuur ah mar kasta oo aad furto bandhig ama dukumiinti eray ah online. Maalmahan, fayraska macruufku ma ahan mid caadi ah waxayna noqdeen naadir.
Horse Troy ama Trojan Horse
Ereyga, faraska Trojan, wuxuu ka yimid shaqooyinka caadiga ah ee suugaanta ee ku saabsan dagaalka Gariigga iyo dagaalyahannada magaalada Troy. Sidaa darteed, magaca ayaa asalkiisu ka yimid, iyo fardaha Trojan waxay bartilmaameed gaar ah ku leeyihiin qalabka isticmaala. Fayrasyadani waxay galaan nidaamkaaga waxayna si toos ah ugu xiran yihiin. Kadibna khawariistu waxay isticmaalaan Trojans si ay u xadidaan macluumaadkaaga xasaasiga ah sida aqoonsiga PayPal, faahfaahinta kaararka deynta, isticmaalaha sirta ah iyo sirta kale. Trojans waxay ku kala duwan yahiin Trojans caadiga ah sida ay u furan yihiin gadaal, taasoo u ogolaanaysa khaniisyada inay xakameyaan qalabka kombiyuutarka. Adware iyo spyware dhibsado qalab aad iyo bedesho goobaha browser ah si aad u badan. Waxay hoos u dhigaan qalabkaaga oo ay daadadkoodii ku daboolaan dad badan oo kala duwan. Ma aha qalad in la yidhaahdo in adware iyo spyware ay ka badan yihiin ka badan oo ka mid ah Trojans ah backdoor iyo ku jiraan dhamaan qalabka iyo faylasha keygen.
Daaqa waa fayras faafaya oo degdeg ah. Waxay geli kartaa habka kombiyuutarka aadna u burburin kartaa tiro fara badan oo faylasha ah. Fayrasku wuxuu dili karaa Wi-Fi-gaaga wuxuuna hoos u dhigayaa hawlaha qalabkaaga. Qalabka Worms loo isticmaalo dadka isticmaala qiyaasta asxaabta, qaraabada, iyo macaamiisha. Waa lagama maarmaan inaadan furin fariimaha emailka ee ka yimid ilo aan la aqoon. Khubarada kombuyuutarku waxay ku andacoodaan in dirxiga uu ku faafi karo joomatari jimicsiga adduunka. Tusaale ahaan, Mellisa iyo Love Letter waxay qabteen boqollaal kun oo qalabka adduunka oo dhan ah
Rootkits waa nidaamyada software kaas oo ka kooban barnaamijyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu qarsado hababka kombuyuutarka, taas oo fududeynaysa kombiyuutarrada si ay u weeraraan nidaamkaaga. Rootkits waxay dhaawici kartaa qalabkaaga; waxay sidoo kale kaa joojinayaan helitaanka Maareeyaha Hagidda, Editor Registry, iyo fayl kale oo la mid ah.